11 Jul, 2014 - 16:07	 2014-07-11T16:06:18+00:00 2014-07-11T16:06:18+00:00 0 Views
Vanhukadzi hounoi mukana wekuti muhwine mibairo mikuru yakarohwa nechando mumakwikwi eKwayedza African Woman of the YEAR.
Tumirai mifananidzo yenyu makapfeka mbatya dzezvipfeko zvemuAfrica (African attire) kuKwayedza, bepanhau revanhu, kuti muve nemukana wekuhwinha mibairi inosanganisira zvitofu, mazawatira emasri pamwe chete nemachira ekusonesa zvipfeko.
Mifananidzo iyi ngaiperekedzwe nefou rinenge rakachwekwa kubvas muKwayedza. Musakanganwe kupedzisa mutsara uri pafomu iri uyekuisa zita renyu, nhambas dzepasmunogara pamwechete nedzenhare.
Zvaskawanda nezvemakwikwi aya onai sekushambadzwa kwaszvakaitwa pazasi. Mifananidzo inotumirwa ichasburitswa muKwayedza svondo regas-rega dakara tasvika pakuhwinha kwemibairo gore rino. Madzimai pindai mumakwikwi aya muhwine!